Ngwa - Zhejiang Tiantai Jierong New Material Co., Ltd.
Mgbe ihe karịrị afọ iri nke oke mmiri ozuzo teknụzụ, akpa nylon anyị, PET na akpa tii tii anaghị egbu egbu, enweghị nje, yana okpomọkụ na-eguzogide site na nyocha nchekwa mba, ha anọworị na ọkwa ọkwa ụlọ.
Silk ihuenyo ngwa nbipute
Anyị ntupu akwa na -ọtụtụ -eji na ubi nke ihuenyo ebipụta ntupu.
Dịka ọmụmaatụ: ụlọ ọrụ elektrọnik, ceramik na ụlọ tile, ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa, ụlọ ọrụ iko, ụlọ ọrụ akwa, ụlọ ọrụ fotovoltaic, wdg.
Organza bụ ụdị yarn na -enwu enwu nwere ederede ma ọ bụ translucent. Ndị France na -eji organza eme ihe dị ka isi ihe eji emepụta uwe agbamakwụkwọ. Mgbe agbachara agba, agba na -enwu gbaa ma udidi ya dịkwa ncha, yiri ngwaahịa silk. Enwere ike iji ya dịka ákwà mgbochi, akwa, ihe ịchọ mma ekeresimesi na mpe mpe akwa.
Ụlọ ọrụ na -ahụ maka ihe owuwu ụlọ ugbu a nwere ihe dị elu ma dị elu maka ihe ịchọ mma nke oghere. Na nhọpụta nke ihe ịchọ mma ụlọ, a na -achọkwa ya ka o zute ụfọdụ ntọala imewe ihe ịchọ mma na ezigbo mma. A pụkwara iji akwa mesh anyị mee ihe ngwa ngwa.
Ntucha ụlọ ọrụ
Akwa ntupu anyị nwekwara ike nọrọ n'otu ọnọdụ n'ime mmepụta mmepụta ihe.
Gụnyere: ihe nzacha na akpa nzacha maka ụlọ ọrụ kemịkalụ, ụlọ ọrụ nri, nchekwa gburugburu ebe obibi, sayensị ndụ, wdg.